Andohan’Analakely : olona iray naratra mafy nofaohin’ny taxi-be tapaka frein | NewsMada
Andohan’Analakely : olona iray naratra mafy nofaohin’ny taxi-be tapaka frein
Par Taratra sur 15/01/2016
Io indray! Taxi-be iray no tapaka frein tamin’ny fidinana avy eny Ambohijatovo mihazo an’Andohan’Analakely, omaly maraina tamin’ny 9 ora sy 45 mn. Olona iray naratra mafy voafaoka ary nifatratra teo amin’ny tambohon’ny minisiteran’ny Fanatanjahantena vao nijanona…
Saika zava-doza no nitranga raha tsy nidona tamin’ny tambohon’ny minisiteran’ny Fanatanjahantena ity taxi-be namoa-doza teny Andohan’Analakely ity. Avy any Ambohijatovo ary hihazo an’Anosy ilay taxi-be no tapaka frein tampoka raha iny nidinana ny fidinana eo Andohan’Analakely. Araka ny fanazavan’ny mpandeha iray, efa somary hafahafa ny fandehan’ilay fiara nony nivoaka ny tonelina. Voalaza fa namono motera ihany koa ilay mpamily raha iny nidina ny fidinana iny. Tsy nitazona intsony anefa ny frein-n’ilay taxi-be ka izao nifaoka olona iray izao. Tsy vitan’izay fa mbola notrongisiny koa ny tambohon’ny minisitera eo Ambohijatovo. Nentina haingana teny amin’ny hopitaly ilay niharam-boina. Tsy afa-nihetsika teo amin’ny toerana nitrangan’ny loza kosa ilay taxi-be.
Tsy vao izao fa matetika mamoa-doza ny ankamaroan’ireo taxi-be miasa eto an-dRenivohitra. Antony iray mahatonga ny loza ny tsy fahafehezan’ny mpamily sasany ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana. Manginy fotsiny ny haratsin’ny fiara hany ka misy fiantraikany any amin’ny lafiny teknika izany ka zava-doza toy izao no iafarany.
Potika daholo koa ireo fiara roa nifandona tany Ranomafana Rn 25, omaly maraina. Taksiborosy iray nandeha mafy sady nisongona fiara teo aloha tao anaty fiolahana mampidi-doza no nahatonga ny loza. Olona maromaro naratra.